Ho avy ve ny Apache OpenOffice? | Avy amin'ny Linux
helena_ryuu | | fampiharana, GNU / Linux, About us
Andro vitsy lasa izay ny Apache Software Foundation (ASF) dia nanambara izany Apache openOffice dia manomboka izao amin'ny tetikasa Top-level (TLP). Andrea Pescetti, filoha lefitry ny Open bookice Apache nilaza hoe:
«Ity fihetsika ity dia fanekena ofisialy fa ny tetik'asa dia mahavita mitantana tena tsy amin'ny resaka teknika ihany fa amin'ny raharaham-pokontany.".
Ny "làlana Apache" sy ny fombany, ny fandraisana fanapahan-kevitra ampahibemaso ary amin'ny mangarahara tanteraka, dia namela ny tetikasa hisarika sy handray mpiasa an-tsitrapo vaovao ary hifidy komity mpitantana tetik'asa afaka hanome antoka ny ho avy milamina. Apache OpenOffice amin'ny teôria.
OpenOffice fue tetikasa loharano misokatra lehibe iray… .. ary ny saingy ao amin'ny «fue«. Rehefa noforonina ho Star Office by Star Division izy tamin'ny taona 90, dia tena zava-dehibe tokoa izany ho toy ny efitrano malalaky ny birao misokatra. Taorian'ny nahazoan'ny Star Division an'i Sun tamin'ny taona 1999, ary ny fanovana azy lasa OpenOffice, napetrak'izy ireo ho toy ny efitrano malalaky ny birao misokatra indrindra.
Niala tamin'ny tetik'asa i Sun, na izany aza, ary taorian'ny nahazoan'ny Oracle ny Sun tamin'ny 2009, ny mpamorona openOffice lehibe, izay mbola tsy faly loatra, dia nanomboka nanamboatra fork antsoina hoe LibreoOfice. Tokony ho faly niara-niasa tamin'i Oracle izy ireo, saingy tsy te hifandray tamin'io i Oracle, ary tamin'ny 2011 dia lasa izy ireo OpenOffice.
Mandritra izany fotoana izany, LibreOffice nanao zavatra miavaka izy. Ireo fizarana lehibe Linux, ahoana Ubuntu, efa vita amin'ny LibreOffice ny efi-tranonao birao lehibe. Entities hafa, toy ny Intel ary ny Free Software Foundation nanome ny fanohanany LibreOffice. Izy io dia naneho fihatsarana kely amin'ny fampisehoana raha oharina amin'ny mifanila aminy, ary nanana tsingerin'ny fampandrosoana mafy sy fanatsarana haingana.
IBM nandatsaka ny vavon'ny OpenOffice, Lotus Symphony, hiasa ao amin'ny OpenoOffice. Ny mpanao mari-pahaizana rindrambaiko, Rob weir, dia nanambara fa:
«ny loharanom-pahalalana napetraka tao anaty symphony dia hapetraka ao amin'ny OpenOffice »ny ekipa mpamorona OpenOffice ao Hamburg koa dia nokaramaina, manana traikefa betsaka amin'ny kaody kaody. Izy ireo dia niasa tamin'ny tetikasa Apache hatramin'ny volana oktobra lasa teo, ary manaraka ny fivoarana miaraka amin'ny ekipa avy any Symphony. manana fampiasam-bola lehibe amin'ity tetikasa ity izahay, ao anatin'izany ny programmer, QA ary ny mpamorona interface interface, miasa am-pahibemaso amin'ny lisitry ny mailaka Apache izy ireo«
Marina fa manohy manatsara ny Apache OpenOffice, fa ny ankamaroan'ny fanatsarana dia toa avy amin'ny kaody code LibreOffice, koa inona no ilaina amin'ny fanohizana ny OpenOfice?
Raha jerena ny drafitra ho an'ny kinova manaraka amin'ny tetikasa roa dia afaka jerena ny fitoviana: mifanentana tsara kokoa amin'ny endrika Biraon'ny OpenXML 2007 - 2013, kinova ho an'ny takelaka sy fisian'ny rahona.
Taorian'ny fanoherana an-taonany maro dia nanohana ny Open Document Format (ODF) 1.2 ihany i Microsoft tamin'ny alàlan'ny fanohanana amin'ny famakiana, fanitsiana ary fitehirizana ao amin'ny Office 2013. Midika izany fa hisy endrika farany izay tohanan'ny Microsoft Office, OpenOffice ary LibreOffice, afaka manao bebe kokoa izany. Manintona ny mpampiasa ny hevitra fampiasana suite-open source.
Araka ny nolazain'i elav momba ny vokatra Apache OpenOffice 3.4, mendrika ve ny mamela tetikasa iray novolavolaina tsara toa ny LibreOffice? Mampalahelo ny manontany raha toa ny AOO afaka mijoro amin'ny LO, satria izy roa no tetikasa Open-Source matanjaka ary izany dia milaza fa, fa tsy mandany fotoana sy manao dika mitovy amin'ny asa, maninona raha manatevin-daharana ny hery ary miasa amin'ny suite birao misokatra malalaka?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ho avy ve ny Apache OpenOffice?
Heveriko fa tsy hanana ny lanjany lehibe ho an'ny vondron'olona rindrambaiko malalaka ny OpenOffice. Ny tena tiako indrindra dia ny vaovao momba ny fanohanan'ny Office 2013 ny endrika ODF, izay hanampy ny olona hifindra monina any amin'ny toerana malalaka kokoa. Tena tsara ny hafatrao. Miarahaba anao.
Ny loharano tany am-boalohany (raha ny fantatro) an'ity lahatsoratra ity (amin'ny teny anglisy), mpanoratra nosoratan'i Steven Vaughan-Nichols, tao amin'ny ZDNet no tsy hita: http://www.zdnet.com/does-openoffice-have-a-future-7000006480/ ho an'ireo liana rehetra.
Ny fandikan-teny sy ny fampifanarahana dia sarobidy, satria tsy isika rehetra no miteny anglisy (mbola), saingy ilaina ny manambara ny loharano ... Midika izany, ny plagiarism dia tsy misy ifandraisany amin'ny fiteny loharano ... na raha Internet fotsiny izany. lahatsoratra.
Ary raha milaza aminao aho fa nanadino fotsiny aho, hehehe hadisoan'ny vao manomboka, nandika azy aho omaly hariva ary raha manontany ny tonian-dahatsoratra ianao dia nisy zavatra kely tsy hitako, ny iray tamin'izy ireo dia nametraka ny rohy mankany amin'ilay tany am-piandohana: P , Tsy ny fikasako hanome ny tenako ny asan'ny hafa, dia miharihary fa fandikan-teny saika ara-bakiteny ny lahatsoratra tany am-boalohany io, ary misaotra anao aho noho ny fanamarihanao ahy, ity lesoka ity (tsy mametraka ny loharano voalohany) tsy miverina intsony.
Vonona sy nikarakara ny loharano aho, Helena, malala, zavatra tsy azonao adino ireo; Tsy azoko fantarina ny loharanon'ny lahatsoratra tsirairay satria tsy fantatro hoe avy aiza izy ireo na avy amin'ny noforoniny manokana.
hehe raha fantatro fa hadisoako io, ary tsy manome tsiny anao aho ¬ ¬, miaiky aho fa diso tamiko !! dia ny nandikako azy tamina rakitra an-tsoratra, avy eo nandika izany tamin'ny fidirana aho, ary tao anatin'ny fiezahana hanamarina ny tsipelina, dia tsy azoko ilay rohy loharano, misaotra betsaka anao noho ianao nanasongadina ireo hevitra sy zavatra hafa. Mampanantena anao aho fa tsy hisy intsony izany TT ^ TT
aza manahy fa ratsy noho ianao aho xD
"[…] Nandika azy halina aho." Ny tianao holazaina dia "nandika azy aho."
Marina ianao, tompoko, marina ny ahy, tokony ho nampiasa ny lafatra taloha lasa lavorary aho, izany hoe "nadika", izay nolazaiko fa mety ho endrika fampifangaroana diso, mariho fa nampifangaroiko tsara ilay verba tamin'ny hevitra faharoa nataoko. xDDDD
Taorian'ny nanandramako ny roa mba hahitana ny tsy fitoviana, na amin'ny Linux na Win7, resy lahatra aho fa miasa ny OpenOffice hiady amin'ity farany. Ho ahy dia tsy mandeha amin'ny Linux izy io, fa amin'ny Win7 dia miasa toy ny tifitra izy; mifanohitra amin'izay nitranga tamiko tamin'ny LibreOffice, izay mandeha tsara lavitra amin'ny Linux.
Mieritreritra aho fa misy dikany ny manokana ny ezaka ho an'ny tetikasa toa ny OpenOffice. Na eo aza ny LibreOffice dia tsara fa misy ny solony. Toa tsy misy vokany amiko ny ezaka ataon'ny dokambarotra raha toa ka maro ny tetik'asa mitovy, saingy vitsy ihany no tsy hitako hoe ratsy.
Izy io dia tranga mifanohitra amin'ny fizarana linux. Amin'ny distrowatch dia misy 100 fotsiny amin'ny laharana nefa tsy misy mitaraina hoe maro izy ireo. Heveriko fa tsara any raha atambatra ny heriko, fa ny manana biraon'ny birao maromaro toa tsara amiko.
Amin'ny anjarako dia raisiko ny Apache OpenOffice.
Tsy mitovy ny eritreritro, saingy manelingelina ahy ny miady hevitra xD. Ny distros sy suite tsotra dia zavatra roa samy hafa izay mety tsy ataon'ny X olona na tsia.
TPT!! Dia tsy hifanohitra aminao aho. XD
Manaja ny hevitra rehetra, mazava ho azy. 🙂
Ankehitriny raha afaka manome ny fomba fijeriko aho, talohan'ny nidirako tamin'ny zavatra hafa.
Andeha hojerentsika, ny fanontaniana amin'ity rehetra ity dia ny filan'ny birao dia mitaky vondron'olona manam-pahaizana miasa matetika amin'izy ireo noho ny toetrany ho fitaovana famokarana. Raha ny momba ny AOO sy ny LO dia izy roa dia mitovy ary ny marina dia tsy ilaina na misy dikany fa misy roa, bebe kokoa noho ny fahafantarana fa misy mandray ampahany amin'ny iray hafa hanatsara ny tenany. Tsy maintsy tadidinao ihany koa fa, helo, ny LO dia efa manana tombony kokoa amin'ny AOO ary tsara, tsy misy dikany ny miasa amin'ny suite hafa raha ny fahitako azy rehefa afaka miditra ao amin'ny ekipa miasa ianao ary manao zavatra lehibe kokoa.
Ny disto kosa dia tetik'asa azo tantanan'ny olona tokana, miankina amin'ny haavon'ny azy ny zava-drehetra, ary raisina an-tsaina izany, ny distro famantaranandro distro, ireo tena lehibe, dia manana fitaovana feno avokoa, na dia manana SolusOS ohatra, izay entin'i Ikey saika rehetra.
Ny tiana holazaina dia hoe, na firy na firy distros mivoaka, ny tena faobe mitsikera dia mifantoka amin'ny vitsivitsy (ubuntu, arch, debian, fedora, suse, chakra, sns.) Iza no tena mandroso be amin'ny Linux sy ny hafa (tsy misy finiavana hamaivanina azy ireo) dia distros tsotra fotsiny izay mifototra amin'ny hafa na fanandramana tsotra na tetik'asa manokana; tsy misy ifandraisany amin'ny fivoarana sy ny fivoaran'ny suite biraon'ny birao, izay tsy vitan'ny olona iray na roa, raha tsy hoe zavatra kely sy tena fototra izy io amin'ny voalohany.
Somary nasiana ady hevitra ratsy, fa hey, tsy toy ny mandeha amin'ny faniriana rehetra eto amin'izao tontolo izao aho xD
Tsara ny adihevitra. Takatra io ary misy dikany. 🙂
Marina ny anao, saingy mieritreritra aho fa ny isa lehibe dia tsy ny isan'ny olona miasa amin'ny tetikasa, na dia nifantoka tamin'izany aza aho tamin'ny fanehoan-kevitra nataoko teo aloha. Ny tiana hambara dia ny tsy maintsy hisian'ny safidy hafa hisafidianana ny olona raha toa ka tsy mifanaraka amin'ny zavatra ilainy ilay programa na tsy mifanaraka amin'ny zavatra tiany na ny fomba fiasan'izy ireo.
Manondro aho, nefa tsy mandeha lavitra intsony, amin'ireo fanehoan-kevitra navoakan'i Pablo na Gadi, izay mitaraina momba ny hafainganan'ny LibreOffice sy ireo olana aterak'izy ireo amin'ny lohateny. Azo antoka fa ankasitrahan'izy ireo ilay safidy.
Inona no hitranga raha manapa-kevitra ny handray ny tetik'asa amin'ny lalana tsy tompon'andraikitra ireo tompon'andraikitra, toy ny efa nitranga imbetsaka tamin'ny hafa? Azo antoka fa olona maro no mankasitraka ny fahafahany misafidy suite hafa.
Angamba fa tsy ny ohatra ny distos dia mety kokoa ny mametraka ny iray amin'ireo tontolon'ny birao. Izaho manokana dia tsy tia ilay gnome na KDE mihitsy. Feno fankasitrahana tsy manam-petra aho fa misy tontolo iainana toa ny XFCE na LXDE ary na dia ireo mpitantana varavarankely maivana aza. Raha tsy izany dia mety mbola mampiasa Windows ianao. 🙂
Mpampiasa openOffice aho nanomboka tamin'ny 1.1 ary mbola tadidiko fa io no dingana lehibe indrindra narahiko taorian'ny nifindran'ny Gimp tany amin'ireo rindranasa maimaimpoana. Ny antony nisafidianana ny OO dia ny fampifanarahana ireo antontan-taratasy Ms Office. Rehefa nandeha ny fotoana dia nifindra tany Libreoffice aho ary ny marina dia mbola tsy nanana olana mihitsy aho. Tena niasa tsara daholo.
miarahaba sy misaotra an'ity bilaogy mahafinaritra ity!
Efa nanandrana libreoffice 3.6.2 aho ary mbola miadana ny manomboka ary mbola misy lesoka ihany koa amin'ny fitsaboana ireo rakitra docx sy doc, ka…. Niverina tany amin'ny openoffice 3.4.1 aho izay, ny nahagaga ahy dia manomboka haingana kokoa ary tsy manana olana amin'ny fanombohana archiovs docx, mazava ho azy fa manomboka azy ireo izany saingy tsy mamela ahy hanavotra azy ireo miaraka amin'io fanitarana io, sy amin'ireo doka mahazatra na medium tantara an-tsehatra. Heveriko fa tsy dia manana ho avy izany AOO fa amin'izao dia tsara kokoa noho ny LIBREoffice, te hampiasa LIBREOFFICE aho nefa mbola misy zavatra kely tsy mifanaraka amiko
Ka efa misy zavatra iray izay avo indrindra amin'ny OpenOffice mihoatra ny LibreOffice. Ka efa misy dikany fa samy misy. 🙂
Farafaharatsiny ho ahy, LibreOffice dia mitondra ahy efatra segondra manomboka amin'ny fotoana voalohany tsindrio ilay kisary mandra-panoratako antontan-taratasy vaovao, amin'ny fotoana manaraka dia eo anelanelan'ny iray na roa segondra aho. Ny endrika doc sy ppt (teny sy powerpoint) dia misokatra mitovy amin'ny MS Office matetika, na dia marina aza fa mila miasa hatrany ny docx sy ny pptx ... satria tsy maintsy ho korontana izany mba hifanaraka tsara amin'izany endrika mihidy.
Ankoatry ny olana mifanentana amin'ny Open / LibreOffice (izay andraikitry ny MS Office amin'ny ankamaroany ny tsy manaraka ny fenitra napetraka), heveriko fa ny tena ilaina dia ny nopetahany takelaka birao ireo birao fiasan'ny birao mba hahafahan'izy ireo miasa tahaka ny an'i Microsoft. Tsy mpisolo vava amin'ny lafiny rehetra amin'ny vokatr'i Microsoft aho, fa amin'ity tranga ity, tsy misy na iray aza ny safidy loharano misokatra izay mbola manoatra ny kalitaony.
Ny fanatanterahana asa tsotra, toy ny fanaovana kopia sy fametahana amin'ny pejin-tranonkala ka hatramin'ny rakitra an-tsoratra, dia nanjary fisedrana mafy rehefa nanandrana nanatanteraka azy ireo tao amin'ny Libre / OpenOffice, ny tranomboky misy ny fampiasa amin'ny takelaka, dia mbola tsy tena ilaina hatreto, sns. Raha toa ka mahavaha ireo olana ireo ny fisehoan'ny kavina kaody maimaim-poana, dia tongasoa. Izaho dia iray amin'ireo mino mafy fa ny fahasamihafana, lavitra ny firaisana tsikombakomba amin'ny tanjona iraisana, dia mandrisika ny fanatsarana azy.
Odyssey amin'ny heviny ahoana? Niasa toy izany tany amin'ny birao maimaimpoana aho ary tsy nanana olana lehibe ... ny olana tokana ananako dia ny fampifanarahana ireo rakitra .docx, sns ...
Faly aho fa efa manohana ny endrika ODF ny MS OFFICE, ka tsy dia marary andoha
Hanao fanamarihana somary tsy voaresaka amin'ny lohahevitra aho, saingy he. Nampiasako ny LibreOffice hatreto amin'ny kinova 3.6, tamin'izay fotoana izay dia tonga tamin'ny fanazavana mazava sasany an'ny Mpanoratra fa mitovy ny fomban'ny paragrafy Lohateny sy lohateny ary nahasosotra ahy ireo antontan-taratasy (maro) notahiriziko. Hatramin'izay dia mampiasa OpenOffice 3.4 aho, izay manaja izay efa notahiriziko.
Midika izany fa tsy raharahako raha manana fanohanana bebe kokoa ny LibreOffice na tsy hitovy intsony ny OpenOffice: hampiasa izay mifanaraka amin'ny filako aho ary izao dia ny OpenOffice. Manantena aho fa indray andro any i Calligra dia hahita ireto titana roa ireto, raha mbola manohy amin'ny OO aho.
Angamba ny tsy tokony hampiasantsika ireo kinova LibreOffice rehefa mivoaka izy ireo raha toa ny fitoniana izay tadiavintsika, ny zavatra mirindra dia ny mitsambikina avy amin'ny kinova miovaova mankany amin'ny kinova miorina, hamonjy ny tenantsika tsy ampoizina, ohatra, manjavona ireo lohateny.
Zavatra iray. Sokafy ny fakana am-bavany. Manana ary? mba hialana amin'ny fikorontanana.
Manamarina amin'ny Validator Total